Careys C. Kaarshe | HIGIL
Category Archives: Careys C. Kaarshe
Careys C. Kaarshe / Saar
Wanka iyo Waraabihii
Posted on Axad, Juunyo 29, 2008 by Jidhidhico	• 6 Faallo
Ummad waliba suugaanteedu waa inay hummaag toosan ka bixisaa kolba sida ummadaasi u nooshahay iyo wakhtiga ay ku jirto intaba. Haddaynu soo qaadano hal maanso oo kamida maansooyinkii Careys Ciise Kaarshe (AUN), waxaa hubaal ah inaanu ka bogan karno taariikh lama iloobaan ah oo ummada Soomaaliyeedi soo martay—taariikhda ayaana mustaqbalka laga dhawrtaa. Maansadan ayaa ah … Sii akhri →
Posted on Axad, Juunyo 22, 2008 by Jidhidhico	• 8 Faallo
Maansada saarka ah ee “Hooyadu waa lama huraan” waxaa si habboon oo hufan, oon hambayn lahayn, u hal-abuuray saaryahanka caanka ah, Eebbana hibada uu u siisay dhinaca saarka, ee Careys Ciise Kaarshe (AUN). Muran kuma jiro in maansadani tahay mid hiyigeena kicinaysa, islamarkaana ina garadsiinaysa booska ay hooyadu inoogu fadhido habkeena nolashan taxanaha ah. Waa maanso … Sii akhri →
Gumaysi iyo Gobannimo
Posted on Arbaca, Juunyo 18, 2008 by Jidhidhico	• 2 Faallo
Saarkan hoos i noogu qoran waxaa mariyey Careys Ciise Kaarshe (AUN). Waa saar, runtii, guusha, gobanimada iyo gallada Soomaaliyeed—ee gumaysiga in yar uun debadii—inooga bixinaya sawir cajiib ah oo ina farxad geliya. Waxa uu saarku kala saaf-saafayaa farqiga u dhaxeeya gobonimada iyo gumaysiga; halkaas oon gobanimada la garab gelin karin gumaysiga. Wuxuu yidhi saaryahanku: Sii akhri →
“Waa maantaan dhalanayoo”
Posted on Isniin, Juunyo 16, 2008 by Jidhidhico	• 2 Faallo
Waxaan ka qoray cajalad markaa uu saarkan ku duubanyahay oo uu qaadayo Careys Ciise (AUN). Sii akhri →